Smartphone ထက်က လက်ဗွေရာများ - PX
Smartphone ထက်က လက်ဗွေရာများ
တစ်ချိန်တုန်းက Smartphone တစ်လုံးပေါ်မှာ Fingerprint Scanner ပါလိုက်ပြီဆိုရင် အထင်ကြီးတဲ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်ခံရတာမျိုး တစ်ခေတ်တစ်ခါက ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ဒါဟာ Smartphone တွေရဲ့ သမရိုးကျ Hardware တစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ Company တွေကလည်း သူတို့ဖုန်းတွေမှာ Fingerprint Scanner ကို ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး စသည်ဖြင့် နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ရကနေ ခုချိန်မှာတော့ Display ထဲ မြှုပ်နိုင်တဲ့အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီ။ ဆိုတော့ကာ Fingerprint Scanner နဲ့ပတ်သက်ရင် Speed & Position ကိုတော့ လူတွေက တရေးတယူရှိခဲ့ကြပေမယ့် သတိမထားမိခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ Generation အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ Fingerprint Scanner အမျိုးအစားတွေပါပဲ။
– Optical Scanners
Fingerprint တွေရဲ့ ကနဦးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက Scanner ထဲမှာ Camera အသေးစားထည့်သွင်းပြီး လက်တင်လိုက်တဲ့အခါ လက်ဗွေရဲ့ ချိုင့်ခွက်၊ အခုံးနေရာတွေပေါ်လွင်အောင် Contrast များတဲ့ 2D Image အဖြစ် ရိုက်ယူသိမ်းဆည်းတာပါ။ အဲဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်ပေးဖို့ LED မီးလုံးအသေးတွေကို Camera နဲ့ တွဲရက်တပ်ဆင်ထားတယ်။ Optical Scanner တွေရဲ့ အားနည်းချက်က ထူပြီး နေရာအတော်ယူတာရယ်၊ Security ပိုင်းမှာ အရူးလုပ်ရလွယ်တာရယ်ကြောင့် ဖုန်းတွေမှာ သေချာမတွေ့ခဲ့ရပဲ Company တွေအနေနဲ့လည်း ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသာ ရှာဖွေအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
– Capacitive Scanners
လက်ရှိအချိန်အထိ Smartphone တွေပေါ်မှာ အသုံးအများဆုံး Fingerprint Scanner လို့ ပြောလုိ့ရတယ်။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် သူ့မှာ Capacitor အသေးစားတွေကို အသုံးပြုပြီး သူကထုတ်လွှတ်တဲ့ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကနေတစ်ဆင့် လက်ဗွေကို ဖမ်းယူပါတယ်။ (လျှပ်စစ်ဆိုလို့မကြောက်ပါနဲ့၊ သူကထုတ်လွှတ်တဲ့ လျှပ်စစ်ပမာဏက မပြောပလောက်အောင် နည်းပါးပါတယ်) လျှပ်စစ်စီးမယ့် Plate ပြား (Scanner) ပေါ် လက်တင်လိုက်ရင် သူနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Capacitor တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်ပမာဏပြောင်းလဲမှုကို Digital စနစ်နဲ့ ပြောင်းလဲသိမ်းဆည်းပေးတာပါ။
သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ Optical Scanner တွေထက် နေရာယူမှုနည်းပြီး ပိုတိကျတဲ့ Fingerprint ကို သိမ်းဆည်းနိုင်တာပါ။ ပြီးတော့ Electrical Signal ကို သုံးထားလို့ Screen off ထားချိန်မှာလည်း လက်တင်ရုံနဲ့ တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်တယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ ချွေးနဲ့အဆီကို Sensitive ဖြစ်တာရယ်၊ ပိုပြီးတိကျမြန်ဆန်တဲ့ Scanner ကိုလိုချင်လေ၊ Capacitor အရေအတွက် ပိုသုံးရလေမို့ ဈေးပိုများနိုင်တာရယ်ပါ။
ဒါကြောင့် ကနဦးတုန်းက Capacitor အရေအတွက်ကိုလျှော့သုံးနိုင်ဖို့ Fingerprint ပေါ်မှာ လက်ကိုပွတ်ဆွဲပြီးသုံးရတဲ့ Swipe Scanner တွေကို သုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် သုံးရအဆင်မပြေလို့ User တွေ Complaint တက်တာ ခံခဲ့ရတယ် (ဥပမာ Samsung Galaxy S5) ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Capacitive Scanner တွေကို Navigation Key တွေနဲ့တွဲသုံးတာ၊ Noti Bar ဆွဲချတာ စသည်ဖြင့် သုံးနိုင်တဲ့အထိ တိုးတက်နေပါပြီ။
– Ultrasonic Scanners
ခုချိန်မှာ ခေတ်မှီပြီး Stable အဖြစ်ဆုံး Fingperint Scanner ကို ပြပါဆိုရင် ဒီ Scanner တွေကိုပဲ ညွှန်ပြရပါလိမ့်မယ်။ Ultrasonic Scanner နဲ့အတူ ပထမဆုံးပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကတော့ Le Eco ရဲ့ Le Max Pro ဖြစ်ပါတယ်။ Capacitive နဲ့ကွာခြားသွားတာက သူ့မှာ နှုန်းလွန်အသံလှိုင်း (Ultrasound) ကို သုံးထားတဲ့အချက်ပါ။ Sensor အပေါ် လက်တင်လိုက်ချိန်မှာ ဖိအားကြောင့် တုန်ခါမှုထွက်ပေါ်လာပြီး အဲဒီတုန်ခါမှုကတစ်ဆင့် လက်ဗွေမှာရှိတဲ့ အမှတ်အသား၊ အရေးအကြောင်းတွေကို 3D Data အဖြစ်နဲ့ သိမ်းဆည်းပေးတယ်။
သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ 3D Scanning ဖြစ်တာကြောင့် ပိုပြီးလုံခြုံတာ၊ ရေစို၊ ချွေးစိုနေလည်း သုံးနိုင်တာ၊ Scanner မျက်နှာပြင်ကို Glass, Metal, Plastic, Ceramic စသည်ဖြင့် ကြိုက်ရာသုံးနိုင်တာ စတဲ့အချက်တွေပါ။
– In-Display Scanners
Leading Technology ဖြစ်လာမယ့် ဒီ Scanner တွေမှာလည်း Optical နဲ့ Ultrasonic ဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပြားနေပြန်ပါသေးတယ်။ In-Display Scanner သုံးနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်က သုံးမယ့် Smartphone Display ဟာ AMOLED Display ဖြစ်နေဖို့ပါ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို Optical Scanner တွေဟာ အသုံးနည်းတဲ့ Technology ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Bezel Less Display တွေ ခေတ်စားလာမှုနဲ့အတူ ဒီ Scanner တွေဟာ အရင်ကထက် ပိုသေးတဲ့အရွယ်အစားနဲ့ Display တွေရဲ့နောက်ဘက်မှာ နေရာရလာကြပါတယ်။ Synaptic ဟာ သူတို့ရဲ့ In-Dispaly Optical Scanner ကို Vivo Apex နဲ့အတူ Smartphone လောကကို ပထမဆုံးချပြနိုင်ခဲ့တယ်။ လက်ရှိ OnePlus 6T ရဲ့ Scanner ဟာလည်း Optical Type ပါပဲ။ In-Display Scanner တစ်ခုအနေနဲ့ အထိုက်အသင့်မြန်ဆန်တယ်ဆိုရပေမယ့် 2D Image ပဲ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ ဒီနည်းပညာရဲ့ Security ပိုင်းကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါသေးတယ်။
Ultrasonic In-Display Scanner တွေကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Ultrasonic Scanner တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်မှာဖြစ်သလို 3D Image Data ကြောင့် Optical Scanner တွေထက် ပိုပြီးလုံခြုံစေမှာပါ။ သို့ပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်ပိုကြီးတာရယ်၊ Scan လုပ်နိုင်တဲ့နေရာ သေးငယ်တာ စတဲ့အချက်လေးတွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ 2018 မှာတော့ Huawei နဲ့ Xiaomi ဖုန်းအချို့မှာတွေ့ခဲ့ရပြီး လတ်တလောက Snapdragon 855 နဲ့အတူ ပူပူနွေးနွေးကြေငြာထားတဲ့ Qualcomm ရဲ့နည်းပညာအသစ်ကြောင့် ပိုကောင်းတဲ့ Ultrasonic In-Display Scanner တွေကို 2019 မှာ Samsung Galaxy Smartphone တွေနဲ့အတူ အစောဆုံးမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဒီတော့ Fingperprint Scanner တွေဟာ Smartphone တွေရဲ့ Smart အဖြစ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့် Company တွေအနေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ Fingerprint နည်းပညာတွေနဲ့အတူ Smartphone တွေကို ဆက်ပြီးထုတ်လုပ်သွားဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။ (Apple လို လက်ရှိမှာ Face ID ကို အားစိုက်နေတဲ့ Company အနေနဲ့လည်း In-Display Fingerprint နည်းပညာ Stable ဖြစ်လာတဲ့တစ်ချိန် Touch ID ဘက်ကို ပြန်မလှည့်လာဘူးလို့ တပ်အပ်မပြောနိုင်) ဆိုတော့ကာ Fan တွေအနေနဲ့ရော Smartphone တွေမှာ Fingerprint Scanner တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စ မြင်ဖူးပြီး ဘယ်ဖုန်းမှာ စ သုံးဖူးခဲ့သလဲ???? Comment မှာ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
တဈခြိနျတုနျးက Smartphone တဈလုံးပျေါမှာ Fingerprint Scanner ပါလိုကျပွီဆိုရငျ အထငျကွီးတဲ့အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့ခံရတာမြိုး တဈခတျေတဈခါက ရှိခဲ့ပမေယျ့ ဒီဘကျခတျေမှာတော့ ဒါဟာ Smartphone တှရေဲ့ သမရိုးကြ Hardware တဈခုလိုဖွဈနခေဲ့ပါပွီ။ Company တှကေလညျး သူတို့ဖုနျးတှမှော Fingerprint Scanner ကို ရှေ့၊ နောကျ၊ ဘေး စသညျဖွငျ့ နရောအမြိုးမြိုးမှာ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုခဲ့ရကနေ ခုခြိနျမှာတော့ Display ထဲ မွှုပျနိုငျတဲ့အထိ တိုးတကျလာခဲ့ပွီ။ ဆိုတော့ကာ Fingerprint Scanner နဲ့ပတျသကျရငျ Speed & Position ကိုတော့ လူတှကေ တရေးတယူရှိခဲ့ကွပမေယျ့ သတိမထားမိခဲ့တဲ့အခကျြကတော့ Generation အဆငျ့ဆငျ့ပွောငျးလဲအသုံးပွုလာခဲ့တဲ့ Fingerprint Scanner အမြိုးအစားတှပေါပဲ။
Fingerprint တှရေဲ့ ကနဦးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အလုပျလုပျပုံက Scanner ထဲမှာ Camera အသေးစားထညျ့သှငျးပွီး လကျတငျလိုကျတဲ့အခါ လကျဗှရေဲ့ ခြိုငျ့ခှကျ၊ အခုံးနရောတှပေျေါလှငျအောငျ Contrast မြားတဲ့ 2D Image အဖွဈ ရိုကျယူသိမျးဆညျးတာပါ။ အဲဒီအတှကျ လိုအပျတဲ့အလငျးရောငျပေးဖို့ LED မီးလုံးအသေးတှကေို Camera နဲ့ တှဲရကျတပျဆငျထားတယျ။ Optical Scanner တှရေဲ့ အားနညျးခကျြက ထူပွီး နရောအတျောယူတာရယျ၊ Security ပိုငျးမှာ အရူးလုပျရလှယျတာရယျကွောငျ့ ဖုနျးတှမှော သခြောမတှခေဲ့ရပဲ Company တှအေနနေဲ့လညျး ပိုကောငျးတဲ့နညျးလမျးတှကေိုသာ ရှာဖှအေသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျအထိ Smartphone တှပေျေါမှာ အသုံးအမြားဆုံး Fingerprint Scanner လို့ ပွောလုိ့ရတယျ။ နာမညျနဲ့လိုကျအောငျ သူ့မှာ Capacitor အသေးစားတှကေို အသုံးပွုပွီး သူကထုတျလှတျတဲ့ လြှပျစဈစီးကွောငျးကနတေဈဆငျ့ လကျဗှကေို ဖမျးယူပါတယျ။ (လြှပျစဈဆိုလို့မကွောကျပါနဲ့၊ သူကထုတျလှတျတဲ့ လြှပျစဈပမာဏက မပွောပလောကျအောငျ နညျးပါးပါတယျ) လြှပျစဈစီးမယျ့ Plate ပွား (Scanner) ပျေါ လကျတငျလိုကျရငျ သူနဲ့ဆကျသှယျထားတဲ့ Capacitor တှမှော ဖွဈပျေါတဲ့ လြှပျစဈပမာဏပွောငျးလဲမှုကို Digital စနဈနဲ့ ပွောငျးလဲသိမျးဆညျးပေးတာပါ။
သူ့ရဲ့အားသာခကျြကတော့ Optical Scanner တှထေကျ နရောယူမှုနညျးပွီး ပိုတိကတြဲ့ Fingerprint ကို သိမျးဆညျးနိုငျတာပါ။ ပွီးတော့ Electrical Signal ကို သုံးထားလို့ Screen off ထားခြိနျမှာလညျး လကျတငျရုံနဲ့ တိုကျရိုကျအလုပျလုပျတယျ။ အားနညျးခကျြကတော့ ခြှေးနဲ့အဆီကို Sensitive ဖွဈတာရယျ၊ ပိုပွီးတိကမြွနျဆနျတဲ့ Scanner ကိုလိုခငျြလေ၊ Capacitor အရအေတှကျ ပိုသုံးရလမေို့ ဈေးပိုမြားနိုငျတာရယျပါ။
ဒါကွောငျ့ ကနဦးတုနျးက Capacitor အရအေတှကျကိုလြှော့သုံးနိုငျဖို့ Fingerprint ပျေါမှာ လကျကိုပှတျဆှဲပွီးသုံးရတဲ့ Swipe Scanner တှကေို သုံးဖို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ သုံးရအဆငျမပွလေို့ User တှေ Complaint တကျတာ ခံခဲ့ရတယျ (ဥပမာ Samsung Galaxy S5) ခုနောကျပိုငျးမှာတော့ Capacitive Scanner တှကေို Navigation Key တှနေဲ့တှဲသုံးတာ၊ Noti Bar ဆှဲခတြာ စသညျဖွငျ့ သုံးနိုငျတဲ့အထိ တိုးတကျနပေါပွီ။
ခုခြိနျမှာ ခတျေမှီပွီး Stable အဖွဈဆုံး Fingperint Scanner ကို ပွပါဆိုရငျ ဒီ Scanner တှကေိုပဲ ညှနျပွရပါလိမျ့မယျ။ Ultrasonic Scanner နဲ့အတူ ပထမဆုံးပှဲထှကျခဲ့တဲ့ဖုနျးကတော့ Le Eco ရဲ့ Le Max Pro ဖွဈပါတယျ။ Capacitive နဲ့ကှာခွားသှားတာက သူ့မှာ နှုနျးလှနျအသံလှိုငျး (Ultrasound) ကို သုံးထားတဲ့အခကျြပါ။ Sensor အပျေါ လကျတငျလိုကျခြိနျမှာ ဖိအားကွောငျ့ တုနျခါမှုထှကျပျေါလာပွီး အဲဒီတုနျခါမှုကတဈဆငျ့ လကျဗှမှောရှိတဲ့ အမှတျအသား၊ အရေးအကွောငျးတှကေို 3D Data အဖွဈနဲ့ သိမျးဆညျးပေးတယျ။
သူ့ရဲ့အားသာခကျြကတော့ 3D Scanning ဖွဈတာကွောငျ့ ပိုပွီးလုံခွုံတာ၊ ရစေို၊ ခြှေးစိုနလေညျး သုံးနိုငျတာ၊ Scanner မကျြနှာပွငျကို Glass, Metal, Plastic, Ceramic စသညျဖွငျ့ ကွိုကျရာသုံးနိုငျတာ စတဲ့အခကျြတှပေါ။
Leading Technology ဖွဈလာမယျ့ ဒီ Scanner တှမှောလညျး Optical နဲ့ Ultrasonic ဆိုပွီး နှဈမြိုးကှဲပွားနပွေနျပါသေးတယျ။ In-Display Scanner သုံးနိုငျဖို့အတှကျ အဓိကလိုအပျခကျြက သုံးမယျ့ Smartphone Display ဟာ AMOLED Display ဖွဈနဖေို့ပါ။
အပျေါမှာပွောခဲ့သလို Optical Scanner တှဟော အသုံးနညျးတဲ့ Technology ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ Bezel Less Display တှေ ခတျေစားလာမှုနဲ့အတူ ဒီ Scanner တှဟော အရငျကထကျ ပိုသေးတဲ့အရှယျအစားနဲ့ Display တှရေဲ့နောကျဘကျမှာ နရောရလာကွပါတယျ။ Synaptic ဟာ သူတို့ရဲ့ In-Dispaly Optical Scanner ကို Vivo Apex နဲ့အတူ Smartphone လောကကို ပထမဆုံးခပြွနိုငျခဲ့တယျ။ လကျရှိ OnePlus 6T ရဲ့ Scanner ဟာလညျး Optical Type ပါပဲ။ In-Display Scanner တဈခုအနနေဲ့ အထိုကျအသငျ့မွနျဆနျတယျဆိုရပမေယျ့ 2D Image ပဲ ဖမျးယူနိုငျတဲ့ ဒီနညျးပညာရဲ့ Security ပိုငျးကတော့ မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈနပေါသေးတယျ။
Ultrasonic In-Display Scanner တှကေတော့ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ Ultrasonic Scanner တှရေဲ့ ကောငျးကြိုးတှရေနိုငျမှာဖွဈသလို 3D Image Data ကွောငျ့ Optical Scanner တှထေကျ ပိုပွီးလုံခွုံစမှောပါ။ သို့ပမေယျ့ ကုနျကစြရိတျပိုကွီးတာရယျ၊ Scan လုပျနိုငျတဲ့နရော သေးငယျတာ စတဲ့အခကျြလေးတှတေော့ရှိနပေါသေးတယျ။ 2018 မှာတော့ Huawei နဲ့ Xiaomi ဖုနျးအခြို့မှာတှခေဲ့ရပွီး လတျတလောက Snapdragon 855 နဲ့အတူ ပူပူနှေးနှေးကွငွောထားတဲ့ Qualcomm ရဲ့နညျးပညာအသဈကွောငျ့ ပိုကောငျးတဲ့ Ultrasonic In-Display Scanner တှကေို 2019 မှာ Samsung Galaxy Smartphone တှနေဲ့အတူ အစောဆုံးမွငျတှရေ့ဖို့ရှိနပေါတယျ။
ဒီတော့ Fingperprint Scanner တှဟော Smartphone တှရေဲ့ Smart အဖွဈဆုံးအစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈနတောကွောငျ့ Company တှအေနနေဲ့ ပိုကောငျးတဲ့ Fingerprint နညျးပညာတှနေဲ့အတူ Smartphone တှကေို ဆကျပွီးထုတျလုပျသှားဖို့ သခြောသလောကျပါပဲ။ (Apple လို လကျရှိမှာ Face ID ကို အားစိုကျနတေဲ့ Company အနနေဲ့လညျး In-Display Fingerprint နညျးပညာ Stable ဖွဈလာတဲ့တဈခြိနျ Touch ID ဘကျကို ပွနျမလှညျ့လာဘူးလို့ တပျအပျမပွောနိုငျ) ဆိုတော့ကာ Fan တှအေနနေဲ့ရော Smartphone တှမှော Fingerprint Scanner တှကေို ဘယျအခြိနျမှာ စ မွငျဖူးပွီး ဘယျဖုနျးမှာ စ သုံးဖူးခဲ့သလဲ???? Comment မှာ ဆကျပွီးဆှေးနှေးကွတာပေါ့။
Photos from internet.
Htet Oo Naing
Snapdragon 675 ဆိုတာ
Huawei Smartphone တွေမှာ သုံးလာတော့မယ့် Liquid Lens ဆိုတာ.…